Waalidiin bannaanbax ka dhigay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Waalidiin bannaanbax ka dhigay Muqdisho
Waalidiin ka cabanaya caruurtooda oo la ciidameeyay, kana qeyb qaatay dagaal ka dhacay Itoobiya ayaa bannaanbax ka dhigaya magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waaldiin isugu soo banaanbaxay magaalada Muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaan Isgoyska KM 4, ayaa ka cabanaya carruurtooda oo la waayay in muddo ah oo ay tababar ugu maqan yihiin waddanka Eratariya.
Banaanbaxayaasha oo watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ku dalbadanaaan in carruurtooda ay dowladda Soomaaliya dib ugu soo celiso, kuwaas oo ay sheegeen in ay maqleen inay ka qeyb galeen dagaalkii looga soo horjeeday Kooxda TPLF ee ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya.
Waalidiinta qaar ayaa intii ay hadlayeen ilmo soo dhaaftay, hooyo Soomaaliyeed oo wiil ay dhashay uga maqan yahay tababarka Itoobiya ayaa tiri "Halka wiil ee aan ilmo ka qabay, wiil iyo gabarba isagaa ii ahaa, niman ayaa iga gatay" oohin ayey la hadli weysay Hooyadaas aan war iyo wacaal u hayn wiilkii ay dhashay oo kamid ahaa askartii ka dagaallantay Eratariya.
Bannaanabaxayaasha ayaa warbaahinta waxay ka dhageysteen warbixintii hay'adda Qaramada Midoobay kasoo saartay dagaalkii ka dhacay Itoobiya, warbixinta ayaana lagu sheegay in ciidan Soomaaliyeed ay ka dagaallameen gudaha dalka Itoobiya kuwaasoo garab siinayay ciidamadii Abiy Axmed iyo kuwa Afawerki ee iska kaashanayay sidii loo ciribtiri lahaa maamulka TPLF.